केसीलाई एयरलिफ्टबाट काठमाडौं लैजाने तयारी — News of The World
२८ असार, जुम्ला । चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राखी १२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले एयरलिफ्ट गरेर काठमाडौं लैजाने तयारी गरिरहेको छ । केसीको स्वास्थ्यस्थिति नाजुक बनेपछि सरकारले हेलिकप्टर जुम्ला ल्याउन लागेको हो ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको शैथ्यामा अनशन बसिरहेका केसीले भने सास रहेसम्म जुम्ला नछोड्ने अडान लिएका छन् । ‘सरकारले काठमाडौं लैजान हेलिकप्टर पठाउदै छ, भन्ने खबर पाएको छु,’ डा. केसीले भने, ‘म कर्णालीको पवित्र भूमिमै मर्न तयार छु, माग पूरा नभई काठमाडौं जान्नँ ।’आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारले बुधबार केसीलाई काठमाडौं लैजान हेलिकप्टर पठाउने तयारी गरेको थियो । बुधबार दिउँसो काठमाडौंबाट हेलिकप्टर उड्ने तयारीमा रहे पनि केसीले जुम्ला नछाड्ने अडान दोहो¥याएपछि रोकिएको थियो । हेलिकप्टर बिहिबार ल्याइने प्रशासनले जनाएको छ ।